Nka nka na ụzụ - Mika Pipeline Technology Co., Ltd.
Magnetism ihe na-akpata ihe
A na-eji ọtụtụ akara aka ndị dị na igwe anaghị agba nchara. Ọtụtụ mgbe, ndị ahịa ga-eji nrịba ama mata ihe dị na ya. Ọ bụrụ na ndọta ndọta, ihe anaghị adị mma. N’ezie, ihe dị iche n’eziokwu. Magnetism pụtara na akụrụngwa nwere nnukwu ike na ike dị elu. . N’ihi na ihe eji eme clamps ugbu a na-abụkarị igwe anaghị agba nchara dịka 201, 301, 304, na 316, mgbe ọgwụgwọ ọkụ gasịrị, ihe eji eme ihe nwere ike bụrụ ihe na-enweghị magnetik, mana akụrụngwa eji arụpụta clamps ga-ezute ekweghị ekwe. na ike nke ngwa agha nke onwe ya. , Ya mere, a ga-enwe ike imezu ike na tensile site na usoro ịtụgharị oyi, nke chọrọ ihe dị nro ka a ga-afụkọta ya na mpempe dị nro. Mgbe mpịakọta gasịrị, ha ga-agbasi ike ma mepụta ndọta.
Ọrụ nke skru lubrication
Ugbu a, ogwe gas dị n'elu carbon kristal steel kposara na-arụ ọrụ dị egwu. Imirikiti ihe nkedo ígwè dị na DIN3017 clamps bụkwa nke a na-etinye n'ọrụ, nke nwere ike ịrụ ọrụ dị egwu. Ọ bụrụ na ịchọghị plasta zinc, ị ga-achọ onyinye wax ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dị nro. N'oge ọ bụla, kom kom waks ahụ ga-akpọnwụ, ọnọdụ okpomọkụ n'oge ebugharị ma ọ bụ gburugburu ebe obibi siri ike ga-eme ka ihe ahụ ghara ịdị, yabụ, lubrication ga-agbada, yabụ na-atụ aro ka ịpịpụ ígwè ahụ dịkwa ọkụ.
T-bolt clamp na mmiri
A na-ejikarị T-bolt na opupu ihe mmiri na igwe kwụ ọtọ ma na-akwụ ụgwọ maka ikuku ikuku. Ebumnuche nke oge opupu ihe ubi bụ ịgbanye mgbasa na ngụkọta nke njikọta hoks ahụ. Ya mere, mgbe ị na-etinye mpịkọ a, ị ga-etinye uche na njedebe nke oge opupu ihe ubi enweghị ike ịda. Ọ bụrụ na enwere nsogbu abụọ kpọmkwem na njedebe: otu bụ na oge opupu ihe ubi ahụ tụfuru ọrụ ya nke ịgbatị mgbasawanye na nsị ikuku wee bụrụ oghere mgbasa siri ike; ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdalata ntakịrị, enweghị ụzọ ọ bụla ị ga - esi mee mgbanwe maka ịgbasa na ikuku mmiri. Ihe nke abuo bu kpo oku nke usoro a na –akpo, ogha ga - enwe ikike iribigide karia, mebie nguzobe nke ulo, ma belata ndu oru nke sisteeti.